Kunyangwe mutambo wakanaka kana kuti usingawanzo pasi pamaonero ako, asi isu takagadzira iyi runyorwa rwemitambo inonakidza yePc yatakanakidzwa newe iwewo.
Takatamba nekuongorora mitambo yakasiyana-siyana saka unozongowana chimwe chinhu chinoenderana. Kana uri kutsvaga yemahara-yekutamba Hondo Royale, zvakadzika RPGs kana tactical kupfura, isu tine zvishoma zvezvese.
Pano pane yedu runyorwa rweakanakisisa PC mitambo iwe yaunogona kuwana kubva kune akasiyana mapuratifomu, akaiswa mune kwete yakarongeka.
Best Hondo Royale mitambo
Type: Yemahara-kutamba-wechitatu-munhu FPS/MMO/Hondo Royale
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo yehondo royale ine yakasarudzika hunhu kugona uye nezvimwe
mutsikisi: Gaijin Kugovera KFT
Mukugadziri: Software yeRima
Zvione pane Steam
CRSED: FOAD haingori imwe Hondo Royale mutambo, zvakare ndeimwe yeakanakisa. Kufanana neFortnite, ndeye mahara kutamba, asi kusiyana nevamwe haitore zvakanyanya.
Mutambo uyu wakavakirwa kunze kweinjini iri kuuya WW2 MMO Vakanyoresa uye inoratidzira huwandu hwekunakidzwa uye inoyevedza mutambo watinoda. Akangwara makanika uye inonakidza kuenzanisa mutambo zvirokwazvo inoita kuti CRSED (yaimbozivikanwa seCuisine Royale) inakidze kutamba.
Semuenzaniso, unogona kushongedza akakosha masilipper anokubatsira kusvetuka marefu marefu kana ane mapapiro eshin pads anobatsira kumhanya kwako nekukurumidza, asi kuvapfeka kunokuvadza simba rako uye zvinoreva kuti haugone kumhanya kwenguva refu usina kuneta.
Kune akati wandei akasiyana mavara ekusarudza kubva zvakare, ane akakosha hunyanzvi anoita kuti zvinhu zvinakidze. Mumwe wevatambi ava anogona kusimudza pfuti-toting zombies kuti amubatsire, mumwe anogona kuenda asingaoneki kwenguva pfupi, mumwe anogona kumhanyira mudenga saThor. Zvese izvi nezvimwe zvakawanda zvinoita kuti CRSED inakidze zvinoshamisa.
Type: Huru-yekutamba Hondo Royale
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo yakanyanya yakakomba Hondo Royale nemuchinjiro-papuratifomu kutamba
mutsikisi: Bluehole / Kakao Mitambo
Mukugadziri: Bluehole / PUBG Corporation
Ona zvinopihwa kuFanatical
PlayerUnknown's Nhandare dzehondo, AKA PUBG, pamwe ndiwo mutambo wakatanga-rudo rweiyo Hondo Royale mhando yemitambo iriko zvino iri kukwira mumapoka. Zvakanyanya kukura kupfuura Fortnite uye haina zvivakwa zvekuvakisa, asi vanhu vanozvida.
PUBG yakatanga hupenyu paPC uye kubvira yaburitswa paconsole uye mobile futi. Kana iwe uri wakakomba nezvekuhwina chikafu chehuku, saka uyu ndiwo mutambo wekutamba. Yakagadziridzwa zvakaringana kubva payakatangisa futi saka paine zvakawanda zvekunakidzwa kuve nazvo kune vatsva vatambi uye zvekare zvakafanana.
Best Basa Rinotamba Mitambo (RPG)
Type: Kuvhurika-kwepasiremhepo RPG
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo inoshamisa yakapfuma nyaya ine zvinotyisa uye zvinoshamisa monsters, yakanaka masango uye nezvimwe kunze
mutsikisi: CD ProJEKT RED
Mukugadziri: CD ProJEKT RED
Muroyi 3: Hunt Hunt ingangodaro iri imwe yeakanakisa PC mitambo yenguva dzese. Zvave kubvira kubvira 2015, asi zvichiri kutamba zvinoshamisa. Tanyura takatenderedza maawa zana nemakumi mashanu muRPG inoyevedza uye tada mineti yega yega.
Witcher 3: Wenyika Hunt wongororo: Akanakisa-mutambi kubva Skyrim
Witcher 3: Hunt Hunt is anoshamisa feat mumitambo dhizaini, ine huru-inotora mweya-inotora nyika kuti iwe urasikirwe mukati. Kubva kuuraya zvikara kusvika pakurara nemaeki, iyo Witcher 3 ine zvese.
Monster Hunter: Nyika
Type: Vhura-nyika chiitiko chinodakadza RPG
Chii chinoita kuti chinakidze? "Iyo yekupedzisira chiitiko chekuvhima" chinotamba neshamwari
Monster Hunter: Nyika ndeimwe yemitambo iyo iyo PC gamers yaifanira kumirira. Iyo yakaburitsa pane console kutanga kwa 2018 uye taida, asi aifanira kumirira kusvika Nyamavhuvhu kuti apinde paPC.
Monster Hunter World inokutendera iwe kutamba iyo "yekupedzisira chiitiko chekuvhima" kungave uri wega kana neshamwari. Mhedzisiro yeiyo inobwinya muropa uye isingagumi inonakidza mutambo isu tine chokwadi chekuti uchafarira.
Type: Vhura-nyika chaiyo RPG
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo yakapenga yakaoma yechokwadi yekurwisa system uye masisitere equices kuti abatwe mukati
mutsikisi: Yakadzika Sirivheri
Mukugadziri: Warhorse studio
Humambo Huya: Kununurwa kunoshamisa, kunowanzo shungurudza, kunogara kuchinakidza yakavhurika-pasi RPG yakagadzwa muItsvene hweRoma Humambo. Iwe unotamba Henry, mwanakomana wemupfuri anozviwana apinzwa mumhirizhonga yehondo shamwari dzake nemhuri vachiuraiwa panopambwa varwi mumusha wake une runyararo. Henry anobva aenda pane imwe nguva yekubatsira vanhu veko, kurwisa makororo uye kubatsira kurwira ramangwana reBohemia.
Humambo Huya: Kununurwa iakajeka RPG yeavo vanoda zano rekusanganisa nezve munguva yepakati. Asi usatarisira kuhwina kurwa kwese sezvaunenge uchida kudzidza kurwa kutanga uye kuti uwane mari yakakwana yezvombo zvakanaka, nhumbi dzehondo uye bhiza rakanaka. Iwe unongova mupfuri wezveshure kwezvose, saka kukomberedzwa nema knights mune zvinorema zvombo kunoguma nekufa kunorwadza uye kwakashata. Isu tinonyatsoda mutambo uyu uye nematambudziko ese aunotikandira.
PC vatambi vanonakidzwawo nenyaya yekuti mutambo uyu unonetsa kune yako system. Edza kuimhanyisa pane ekupedzisira masetingi uye iwe unoyambirwa iwo anoonekwa anongogadzirirwa ramangwana hardware. Zvakafanana naCrysis asi zvezera idzva.
Kutenda kwaAassassin: Valhalla
Type: Vhura-nyika chiitiko-dhizaini RPG
Chii chinoita kuti chinakidze? Mepu yakakura yekuongorora uye iyo yakanyanya RPG-yakaita zvinhu yakamboonekwa muFrancise
Kutenda kwaAassassin: Valhalla zvinoshamisa zvisingarambiki. Takafunga Mhemberero uye Odyssey zvaive zvakanaka asi Valhalla chimwe chinhu chitsva uye chinozorodza. Iye zvino tave mubhutsu dzemurwi weViking pamahombekombe eEngland yekare achiparadza.
Iyo inonakidza kubuda munhevedzano, iine yakagadziridzwa hunyanzvi sisitimu uye zvinoshamisa RPG zvinhu zvinoita kuti inakidze zvinoshamisa kwemaawa nemaawa. Imwe inosimbisa kugona kudaidza vamwe vako maViking kuti vakubatsire kupamba mamongi ari pedyo uye mabhesi evavengi kuti uwane zviwanikwa zvekuvaka yakowo.
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo yakanakisa Diablo mhando mutambo kunze uko? Uyezve ndezvemahara?
mutsikisi: Kusveta Magemhu eGehena
Mukugadziri: Kuteera Gear Mitambo
Dhawunirodha kubva kuSteam
Nzira yeKutapwa ndeimwe yemitambo iyo yaive yakanaka payakatanga kuburitswa uye yakaramba ichiita zvirinani kubvira. Icho chiito RPG chakaiswa mune yerima fungidziro yepasirese ine kusimbisa kwakasimba pakurwisa visceral, yakadzika hunhu hunhu uye yakanaka, yechinyakare mafaro. Uyu mutambo zvakare hausi wakasununguka-kutamba-chete asiwo inotsigira singleplayer, vatambi vakawanda uye co-op Gameplay zvakare.
Akanakisa Munhu Wokutanga Bhowa (FPS)
Mukugadziri: id Software
Ona nzvimbo iri pamutemo
Doom yakazosvika kuPasi uye pasi rakazara nemhando dzese dzemadhimoni anoda kuuraya. Ndiro basa rako kusanganisa.
Takapwanya, kubvarura nekurovera nzira yedu nemuDoom Eternal uye ndakaona kuri mafaro akawandisa. Iwe unoziva zvauri kuwana neDoom uye kubuda kwazvino kwakakwenenzverwa, kuratidzwa kunakidzwa kwemhirizhonga yekuuraya madhimoni. Kana iwe uchinakidzwa nekutamba vako vanopfura pakazara-tilt saka Doom Eternal isarudzo yakakwana. Yakanyanya, inonakidza uye oh-so-inogutsa zvakare. Zvechokwadi kwete zvevaduku zvakadaro.
Type: Imwe-kutamba / Co-op / Multiplayer mauto kupfura
Mukugadziri: Infinity Ward
Kudanwa kweDuty Yemazuva Ano Hondo iri kuwana nyowani nyowani uye iri kudzokera kumidzi yayo. Ino nguva yakatenderedza pane mushandirapamwe unobata single-player, co-op gameplay uye, hongu, maitiro evazhinji.
Infinity Ward yakanyatso kuburitsa zviteshi zvese neiyi mupfungwa. Inonzwa zvakanyanya senge yekutanga Hondo Yemazuva ano yakamboita kumashure muna 2007. Mashoma majeti, akanyanya kuita chiito chakakomba. Vateveri vevakuru Kwezve Duty mitambo vachanakirwa neiyi zvechokwadi. Paunenge uchinge wapedza mushandirapamwe, pane akati wandei co-op matanho ekutamba uye chiitiko chakamutsiridzwa chevazhinji chinosanganisira iyo 64-mutambi modhi inonzi Ground Hondo.
Chii chinoita kuti chinakidze? Nechekunyepedzera nyaya-inotungamirwa post-apocalyptic yekushambadzira ine inoshamisa mifananidzo uye Mad Max vanonzwa
mutsikisi: Yakadzika sirivha / Koch Mitambo
Mukugadziri: 4A Mitambo
Ona zvinopihwa kuCD Keys
Ona nzvimbo yepamutemo/Epic Chitoro
Metro Ekisodo ndiko kubuda kwechitatu mune kwakatevedzana uye kumwe kudzoka kuuchenjeri kubva 4A Mitambo. Iwe unotora chinzvimbo cheArtyom uyo ari mukusuwa mukutsvaga zviratidzo zvehupenyu kupfuura iwo akadzivirirwa uye matongo eMoscow. Kurwira kupona kutarisana nemamiriro ekunze anopisa uye hupfumi hwezvakaipa zvinosanganisira zvese kubva kubheti, kusvika kumhuka dzine mapapiro, zvinopesana nezvinoparadza uye uturu hunopfira chipfira.
Metro Ekisodho ongororo: Vese vari mukati merimwe rakakurumbira single-player shooter
Iko kune chaiko kunzwisisika kwekusuwa uye nguva dzakaoma pano sezvo iwe uchigara uchimanikidzwa kutsvaga for ammo, giya uye zvekushandisa kuti uchengete pfuti dzako dzichiridza kana dzinde kuburikidza nemumvuri uchinyatso kudzivirira kufa. Gare gare, rakakomba Mad Max vibe eeks mumutambo futi uye isu hatigone kutaura zvakawanda tisingasvibise, asi isu takaida. Kana iwe wakanakidzwa nemitambo yapfuura, iyi inosungirwa kunge iri kurova futi. Uye paPC inotaridzika kunge inoshamisa.
Tom Clancy's Rainbow Tanhatu Siege
Type: Chikwata-chakavakirwa zano kupfura
Chii chinoita kuti chinakidze? Kirasi-yakavakirwa co-op chiito neine zvakanyanya padyo-vekota hondo
Mukugadziri: Ubisoft Montreal
Tom Clancy's Rainbow Six Kutyisidzirwa pakutanga kwakaonekwa pachiitiko muna 2014. Asi hausi mutambo wekare sezvo uchigara uchivandudzwa, kugadziriswazve uye kuzorodzwa nezvitsva zvemukati, mavara nemamepu.
Uyu mutambo, mukukosha, wepamhepo hunyanzvi hwekupfura iyo inokwikwidza timu diki yevatambi ichirwisa imwe Zvikwata izvi zvakapatsanurwa kuita varwisi nevadziviriri vane zvinangwa zvakasiyana - kudzivirira / kudzikamisa bhomba, kubatirira kana kununura akabatwa kana kungobvisa rimwe timu. Mumwe nemumwe "opareta" mumutambo ane mutambo wekutamba wakasiyana nezvombo uye magajeti ekuvabatsira kupedzisa basa ravo. Zvinoitika mumutambo zvinoenderana zvakanyanya nemavara ari kutambwa, saka pane zvakawanda zvakasiyana uye zvinonakidza zvakawanda.
Tom Clancy's Rainbow Six Kutyisidzirwa inogona zvakare kutengwa semutambo wepasi wemari inonzwisisika - ichikubvumidza iwe kuti ushandire nzira yako kuburikidza nevashandisi vakuru kana iwe unogona kubhadhara emahara edhisheni uye uwane mukana wekuwedzera zvimwe.
Jahena Regai Kusununguka
Type: WW2 timu-based shooter
Mukugadziri: Nhema Matter Pty Ltd.
Yakagadziriswa nechikwata chidiki chakazvimiririra, chakagadzirwa muUngano Injini 4 uye chakavakwa nechinotarisana nacho Gameplay chaiyo, Hell Let Loose mumwe mutambo weWW2 uzere nevimbiso. Mutambo uyu unotiyeuchidza nezve Post Scriptum uye zvechokwadi inoita kunge yakazara-pane yekuchenjera kwemauto simulator.
Kunyangwe parizvino mukutanga kuwana, Hell Let Loose zvirokwazvo zvakakodzera kutarisa. Kana iwe uri fan weakakomba zvemauto sim maitiro ekupfura (senge ARMA kana Chikwata) saka izvi zvinonyatso kumaka mabhokisi ako. Kune humping hwakawanda kutenderedza mepu, timu yenjodzi inouraya uye inoshungurudza nguva apo iwe pausingazive kuti ndiani akakuuraya, asi kune zvakare zvakawanda zvekunakidzwa kuve nazvo, kunyanya kana uchitamba neshamwari.
Kubatana ndiko kiyi kwete chete kune yako timu kuhwina asiwo kune yako kunakirwa kweiyi. Wana vatambi vatatu pamwe chete uye musvetuke mutangi - neumwe nekungwarira kutyaira, mumwe achimisa pfuti huru uye mumwe achiraira uye iwe uchakurumidza kupwanya nzira yako kuburikidza nemitsetse yevavengi. Iwe zvakare uchawana kuomarara kwakaita Hondo dzeWW2 dzaive dzakadaro, kana zvichitora zera kutenderedza turret yako kana iwe haugone kuona chinhu kuburikidza netudiki diki rekuona slits kumberi.
Type: Chikwata-chakavakirwa vakawanda FPS
Chii chinoita kuti chinakidze? Pamhepo-chete gameplay ine kirasi-based system uye inoratidzika yakajeka
mutsikisi: Blizzard Varaidzo
Mukugadziri: Blizzard Entertainment
Overwatch inonyanya kuita online-chete wekutanga-munhu kupfura-anotsva-brawler ane runako, katuni mifananidzo uye inonakidza mutambo unonakidza.
Overwatch wongororo: Inowoneka, inopinda muropa uye inotyisa inonakidza kunakidza
Ndiwo mukurumbira eSports mutambo asi wakanaka kune vasina kujaira vatambi futi. Isu takafunga kuti yaive yakajeka zvachose patakaiongorora muna2016 uye ichiri kuramba ichiunza mufaro kuvanhu vazhinji kunyangwe izvozvi. Overwatch ingangoita imwe mutambo dhizaini kukunda kubva kuBlizzard uye inofanirwa kutamba.
Chii chinoita kuti chinakidze? Makirasi egamba, inononoka gameplay asi inokurumidza TTK uye yakawanda kunakidzwa.
mutsikisi: Mhirizhonga Mitambo
Mukugadziri: bongozozo Games
Valorant inonzwa semuchinjika unonakidza pakati peCS: Go uye Overwatch. Mukwikwidzi anopfura anokanda zvikwata zviviri zvidiki kurwisa chimwe.
Chii chinonzi Valorant? Chinongedzo chekusunungura-kutamba-dhorobhu nemazano ekuti ungakunda sei
Makirasi egamba ane hunyanzvi hwawo uye anogona kugadzira kana kutyora mutambo zvichienderana nemashandisirwo aanoitwa. Valorant haina kukurumidza-kumhanya-mhanya asi ine hunyengeri kugona, sevamwe vanokwikwidza vanopfura kunze uko. Zvinonakidzawo uye ndezvemahara futi - uriwo mutengo wakanakisa wechero chinhu.
Type: Bullet-nguva FPS
Chii chinoita kuti chinakidze? Anoshamisa kushandisa kweane bullet-nguva uye nguva-manipulation emitambo mechanics
mutsikisi: SUPERHOT Chikwata
Mukugadziri: SUPERHOT Chikwata
Ona zvinopihwa paFanatical
Superhot ndeye munhu akangwara akaumbwa-munhu wekutanga kupfura uko nguva inongofamba chete kana wafamba. Izvi zvinogadzira kune vamwe vanonakidza mutambo mechanics uye yakanyatsonyudza yakanyanyisa gameplay.
Iyi zvirokwazvo FPS inoda imwe pfungwa paunenge uchitamba. Iwe unofanirwa kukwikwidza kunze mamiriro acho nguva dzese paunokora, asi kunyangwe kutendeuka kuti utarise kutenderera kunofambisa nguva kumberi uye kunounza pavazhinji vevavengi gehena-yakatsunga kukuuraya iwe. Superhot inonakidza uye zviri nani muVR.
Kutambudza-Bata: Global Zvinotemesa (CS: Go)
Type: Yemahara-yekutamba-yakatamba timu-yakavakirwa zano yekupfura
Chii chinoita kuti chinakidze? Twitch kupfura nekushaya chinangwa pasi pasi pekuona pfuti mechanic
Mukugadziri: Vharu / Yakavanzika Nzira Nzira Yevaraidzo
Dhawunirodha pane Steam
CS: GO ibhizimusi rakakomba. Uku ndiko kubuda kwekupedzisira muCounter-Strike nhepfenyuro - franchise iyo yagara ichifananidzwa nemakwikwi eFPS Gameplay. Ndiwo mukurumbira eSports mutambo uye unofungidzirwa zvakanyanya futi.
Kana iwe uchida vatambi-vakavakirwa muchikwata, saka ichi ndicho chako. Izvo zvakare zvachose yemahara izvozvi, saka chii chisingade?
Type: Online-chete FPS
Chii chinoita kuti chinakidze? Yakavakirwa-based gameplay iyo inogona kunakidzwa neshamwari kune dzakasiyana siyana nzvimbo dzinoshamisa
Destiny 2 inofungidzirwa nevazhinji semutambo wakanaka kwazvo zvechokwadi. Nyaya inonakidza inonyatso itaita mutambo uri nani pane wekutanga. Izvo zvakare zvinoshamisa zvakagadzirwa zvakanaka sezvo zvichingori nyore kuti vatambi vatsva vapinde seyakaomarara PC vatambi.
Destiny 2 wongororo: Iko kusangana kwakakwana kweMMO uye imwe chete-mutambi
Destiny 2 Kusiya kwekutanga ongororo: Cayde akafa mwana, Cayde akafa
Zviri nyore kurasika mune zvese quests uye kupamba muDestiny 2 uye kana iwe ukangotanga kutamba mutambo uyu, iwe unoshamisika kuti maawa ese akaenda kupi. Destiny 2 inenge ichinyanyo kunakirwa neshamwari, asi iwe unogona kutamba wega wega.
Chii chinoita kuti chinakidze? Hondo yemazuva ano neyekare-chikoro FPS inonzwa
mutsikisi: Tarisa Imba Inoshanda
Mukugadziri: New World Inopindirana
Insurgency: Sandpaper iboka-rakavakirwa timu, yekuchenjera kupfura ine hutsinye uye inouraya vepedyo makota ekurwisa. Uku kurwa kwemazuva ano FPS ine chekare-chikoro kunzwa. Hapana kana kusava nematambudziko kwemazuva ano matatu-Anopfura, zvakanaka chete zvekare zvamboitwa pfuti nekushanda.
Kana iwe uri mushure mekuoma kweFPS saka iyi ndeyako. Zvinouraya ballistics, mwenje yekurwisa mota, zvombo zvinoparadza uye odhiyo odhiyo zvakare zvinogadzira Insurgency: Dutu rechimvuramabwe rinonakidza kwazvo kupfura.
Yakanyanya kuvhura-nyika / kupona mitambo
Type: Kuvhura-kupona kwenyika
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo inogadzirwa nenzira inogadzirwa viking purigatori inogona kutambwa neshamwari dzinosvika 9
mutsikisi: Kofi Stain Publishing
Mukugadziri: Gedhi reSimbi AB
Valheim inguva yekutanga kuwana, indie kupona mutambo unofemerwa netsika yeViking. Kutanga kwayo kwakafarirwa zvinoshamisa uye nechikonzero chakanaka. Uyu mutambo wakajeka wakavhurika-pasirese wekupona uye wekugadzira mutambo une inoshamisa vibe uye inopenya Viking theme kumisikidza. Iyo ine ese ari maviri-mutambi uye co-op PvE (mutambi vs nharaunda) makanika, inogutsa yekuvaka fizikisi uye inoranga kurwisa system. Iwe unorwa nemabhosi kuti ufambire mberi kuburikidza nemutambo uchivakawo marudzi ese ezvinhu kusanganisira kumisikidza Viking zvikepe zvehondo.
Valheim inotambwa zvakanyanya neshamwari uye unogona kunakidzwa zvakanyanya kuita saizvozvo.
Chii chinonzi Valheim? Mutambo wekupona kweViking wakaongororwa (nematipi uye matipi)
Type: Yakavhurika-nyika nzvimbo yekuongorora / kuvaka
Chii chinoita kuti chinakidze? Super inogutsa kuvaka mechanics uye intrigue
Mukugadziri: Kofi stain studio
Inogutsa inorarama zvinoenderana nezita rayo munzira dzakawanda dzakasiyana. Uyu mutambo unonakidza wekutanga wekuwana uyo unokuisa iwe kune kure kure kuunganidza zviwanikwa uye kuvaka mafekitori. Kushanda nenzira yako kuburikidza nemiti yetekinoroji, kubva kusimba remarasha kuenda kunyukireya uchidzivirira kudyiwa nemadandemutande uye zvisikwa zvinopisa moto.
Zvinogutsa zvinogona zvakare kuridzwa neshamwari mu-co-op modhi yevanhu vanosvika vana, kunyangwe isu takakwanisa kuwana vanhu vatanhatu vachitamba neashoma mutambo faira tweaks. Ingonyeverwa zvakadaro, kana iwe uchinge wawana kuvaka nekugadzira, zvinozokurumidza kupinda muropa.
No Romunhu Sky
Type: Kuvhura-nyika nzvimbo kuongorora / kupona
Chii chinoita kuti chinakidze? Maitiro akagadzirwa zvakasikwa apo hapana mitambo miviri yakafanana
mutsikisi: Mhoro Mitambo
Mukugadziri: Hello Games
No Romunhu Sky yakatanga kuvambwa mumazuva akaipisisa e 2016 uye, kunyangwe iyo isati yaparurwa-hype, yakasiya vazhinji vachinzwa kushushikana uye kushatirwa nekushaikwa kwesarudzo dzevazhinji
Dzakadzokororwa dzinoverengeka gare gare uye No Man's Sky inoyevedza nzvimbo yekushambadzira ine yakagadziridzwa nzvimbo masitepisi, yakagadziridzwa mafirita uye mafirati masystem uye yevatambi nzira yekudzidzira.
Hapana matenga eMurume matangi evatangi: Zvakakosha zvinhu zvekuziva kuti uende kumberi mujaho wenzvimbo
Anoshamisa mafoto epadenga seakatorwa muNo Man's Sky
Pakati payo, Hapana Denga reMunhu rakanakisa zvakadaro sezvo ichizvikudza 18 quintillion mapuraneti anogadzirwa kuti aongorore, achiva nechokwadi chekuti hapana rwendo rumwe rwekutsvaga rwakafanana neumwe.
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo rusununguko yekukanda, kufura uye kuvaka dombo rakaisvonaka kana kungo gadzira zvisina kujairika uye misungo inoshamisa yekutambudza vavengi vako
mutsikisi: Kutarisana neStudios
Mukugadziri: Kutarisana neStudios
Kune akawanda mitambo yekupona inowanikwa yePC vatambi, asi Rust inoenderera ichinyanya kuve inozivikanwa. Uyu mutambo wepamhepo wepamhepo paunogona kuvaka mabhesiki akanaka, kuita shamwari nyowani, kuongorora uye kupona uchirwisa nharaunda ine hukasha uye nezvimwe. Pane zvakawanda zvekutamba sarudzo uye zvakajairwa kugadzirisa zvakare. Pwanya matombo, tema muti, gadzira zvimwe zvombo kuti uzvidzivirire uye unakirwe nezvose zviripo. Kana iwe uchivenga vanhu vachikanganisa kunakidzwa kwako, panogara paine sarudzo yePVE.
Rust iri kugara ichigadziriswa nezvitsva zvemukati kuti ichengete chinyowani nekunakidza. Zvakareruka zvinowedzerwa zvinogona kuita mutsauko mukuru kumutambo, semagetsi semuenzaniso. Rust ine nharaunda yakakura inotevera uye hapana magumo evhidhiyo paYouTube neRust-based hjoyity kuti unakirwe.
Type: Vhura-nyika pasi pemvura kupona
Chii chinoita kuti chinakidze? Yakagadzika pasi pemvura kune iri kure nyika mutorwa
mutsikisi: Kusazivikanwa Worlds Varaidzo
Mukugadziri: Nyika Dzisingazivikanwe Varaidzo
Imwe yakavhurika-yepasirese mutambo mutambo wekuwedzera kune yako runyorwa. Ino chete nguva ino yakaiswa pasi pemvura pane imwe nyika nyika. Ongorora kudzika kwemakungwa, dhizaina giya nyowani, nyonganiso nezvezviri pasi pegungwa uye unakirwe nekuona kunoshamisa uchiedza kurarama.
Hauna chokwadi? Zvakadii nezve pachivakwa pasi pegungwa? Kana yemahara VR rutsigiro kune vese iyo Oculus Rift uye HTC Vive?
Type: Base kuvaka uye kupona
Chii chinoita kuti chinakidze? Quaint adventure kubva pakuona kutsva
mutsikisi: Xbox Game Studios
Mukugadziri: Obsidian Varaidzo
Fungidzira kana Huchi I Shrunk Vana vaine mutambo wevhidhiyo uye une pfungwa yekuti uyu akaita sei. Iyo inonakidza, inonakidza uye isinganzwisisike inopindwa muropa base-kuvaka kupona mutambo. Imwe kwaunotamba semumwe wevana vana vakadzikiswa kusvika kuminiti saizi uye vari kuyedza kurarama kuseri kwemba. Hazviiti zvakanyanya kuipa, kusvikira waona kuti chipembenene chose chiri mubindu rakapoteredza chinotyisa. Unogona kuvauraya uye kupfeka nhengo dzemiviri yavo senhumbi dzokurwa uye zvombo kana kuvabikira kuti vadye. Kupona kwakaoma, asi kufamba uchitenderedza gadheni kunovhura nyika yekuwana iyo isingarambike inonakidza.
Best chiitiko mutambo mutambo
Type: Chiitiko chekuita
Chii chinoita kuti chinakidze? Mutambo wePlayStation unonyanyozivikanwa wakazoita kuti uve paPC
mutsikisi: PlayStation PC LLC
Mukugadziri: Santa Monica Studio
Mwari weHondo akarova dutu rekuongorora kwakanaka (kusanganisira zvedu) payakabudiswa paPlayStation kumashure muna 2018. Iye zvino yava paPC uye nehuwandu hwekuwedzera hunoita kuti inakidze kusanganisira yakagadziridzwa 4K mifananidzo, kuwedzera kweGTAO neSSDO, zvose Nvidia Reflex uye DLSS tsigiro nezvimwe. Iyo zvakare inotsigira 21: 9 widescreen maonero uye ne rubatsiro rwe Flawless Widescreen, takaitawo kuti ifambe na32:9. Mamwe maonero anoshamisa uye mutambo unoshamisa unonyudza wakamirira PC gamers vakapotsa kusvika zvino.
Type: Sci-Fi chiito chiitiko
Chii chinoita kuti chinakidze? Remedy inonakidza kutaura-nyaya uye inopenya yefizikisi-mutambo
mutsikisi: 505 Games
Mukugadziri: gadzirisa Studios
Isu tagara tiri mafani makuru emitambo kubva kuRemedy Varaidzo uye Kudzora inoenderera mberi nemaitiro ezvinyorwa zvekare kubva kune iyo studio. Uyu mutambo wakajeka wesci-fi chiitiko chine kutungamira kwakasimba kwechikadzi, mutambo unoshamisa, rondedzero yakanakisa uye nguva zhinji dzemusango. Zviitiko zvisinganzwisisike zvesainzi, nharaunda dzinoparadza uye masimba etelekinetic anoita kuti mutambo unakidze asi kwatiri imhepo inogadzirwa nemifananidzo, mutsara wenyaya uye odhiyo. Kudzora ibasa reunyanzvi.
Type: Wemadokero chiito chiitiko
Chii chinoita kuti chinakidze? Mutambo wekupedzisira hauna kumbobvira waita iyo kuPC, asi pakupedzisira, tinogona kunakidzwa neimwe Rockstar nyanzvi
mutsikisi: Rockstar Mitambo
Mukugadziri: Vadivelu Comedy Rockstar Studios
Zvione pane Rockstar Mitambo Rokutanga
Takamirira kwenguva yakareba, asi Red Dead Redemption 2 iri pakupedzisira paPC. Yakagadziridzwa uye kuvandudzwa zvakare - ine graphical kugadzirisa uye tekinoroji yekuwedzeredza. Mamwe mabhonasi ePC vatambi anosanganisira zvimwe zvirimo zvinosanganisira nyowani bounty yekuvhima mamishini, hupfumi mepu, trinkets, zvombo uye nezvimwe.
RDR 2 ine mbiri paPC, kunyanya mu4K ine HDR inoonekwa. Kune zvakare zvakawanda zvinofanirwa kutaurwa kune chinangwa chako chechitanhatu-chekupfura negonzo uye keyboard kana kunyatso kuvhima mhuka dzesango uchinyatso tarisa neuta hwako.
Uyu mutambi ane maawa nemaawa emutambo wemutambo uye zvimwe zvekunakidzwa kana wapedza iyo huru nyaya uye kunamatira mune yepamhepo zvisikwa. Isu takada Red Dead Redemption 2 payakatanga kuoneka pakoni uye tinoida zvakanyanya paPC.
Type: Kufamba simulator
Chii chinoita kuti chinakidze? Rufu Stranding yakagamuchirwa nerumbidzo yakajairika payakaburitswa paPS4 kumashure muna 2019, ikozvino yauya kuPC ine zvigadziriso zvinosanganisira kutsigirwa kwakakura, zviratidziro zvakavandudzwa uye Half-Life crossovers.
Mukugadziri: Kojima Productions
Rufu Stranding inoona nyeredzi Norman Reedus naMads Mikkelsen nevamwe vachibatsira kutaura yakapfuma nyaya yeKojima. Mutambo uyu wakatarisana naSam Porter uyo ari kuda kuponesa vanhu kubva mukuparara kuri kuuya sezviitiko zvemashura nezvimwe zvisikwa zvepanyika zvinomuka kutenderera pasirese. Iye mutakuri wekutakura, kunze kwekutsvaga kukuru kwawakamboita.
PaPC, Rufu Stranding inopenya chaizvo, iine nzvimbo dzakanaka, zviono zvinokatyamadza uye mamwe akanyanya kutonhorera mavibes (chero usiri kuvhundutswa neBTs kana kudonha kubva pakutakura huremu hwakawandisa). Sezvaungatarisira kubva kumutambo weHideo Kojima, ibhodhar munzvimbo dzine isinganzwisisike uye inoshamisa kumashure uye maoodles erondedzero inonakidza. Pane zvakawanda zvekufamba uye kukwira makomo kunobatanidzwa mune ino uye iwe uchada kudzidza kutora nguva yako kana njodzi yekudonha pasi nharaunda ichiparadza mutoro wako unokosha, asi pane chimwe chinhu chinogutsa pakusvika kwauri kuenda nebasa rakaitwa nemazvo.
SpongeBob SquarePants: Hondo yeBikini Pazasi - Yakaiswazve mvura
Type: 3D papuratifomu
Chii chinoita kuti chinakidze? Ichi chiyeuchidzo chemutambo wakatangwa kare muna 2003 uye unoshamisa ipapo.
Mukugadziri: Yepepuru Mwenje Studios
Magadzirira here, vana? Handisi kukunzwa? Iyo yakasarudzika 3D platformer SpongeBob SquarePants: Hondo yeBikini Pazasi yakagadziridzwa nePurple Lamp Studios uye chimwe chinhu chakakosha.
Kwete chete kugadzirisa asi inoshamisa inogadziridza ichokwadi kune SpongeBob universe. Mapikicha ane mavara, anoyevedza, anonakidza dhizaini uye quirky odhiyo inoita kuti mutambo uyu uve wakanaka kune vateveri veSpongebob. Vana nevakuru zvakafanana.
Unogona kutamba seSpongeBob pachake, pamwe naPatrick, Sandy uye nezvimwe. Iyo platforming yakaoma, asi pane zvakawanda zvekuda nezvemutambo uyu kana iwe uri mune iyo mhando yechinhu.
Anotuka Anoponesa Musika
Type: Chiitiko chekuseka / kudhizaivha
Chii chinoita kuti chinakidze? Heseity hwese hwaRick naMorty asi mune mutambo fomu ine yakawanda yekutsvaira nemhirizhonga
mutsikisi: Squanch Mitambo, Inc.
Mukugadziri: Zvikamu squanch Games, Inc.
Kana iyo grafiki yekushongedza uye odhiyo yemutambo uyu inoita kunge inozivikanwa, imo nekuti inouya kubva kumubati-mugadziri waRick naMorty. Trover Anochengetedza Iyo Yese mutambo wechiitiko wekushanya unoenderana nezvose zvakajairika desktop kutamba uye chaiyo chaiyo uchishandisa HTC Vive kana Oculus Rift.
Sezvaunogona kutarisira, mutambo uyu unosanganisira zvisingaenzaniswi huwandu hwenzvimbo-yakavakirwa weirdness, yakashata mutauro uye weird uye inoshamisa hilarity. Ingangove iwo anonyanya kukoshesa chiito mutambo wemujahwo iwe ungangosangana nawo asi kuputika kwakazara kana iwe uri fan of the humor of Rick and Morty.
Zvinongotora maawa matanhatu kuti upedze, asi ipapo hausi kubhadhara mutengo weatatu-mutambo uye uine mavara mazhinji ekutaura navo, simba vacheche (kusimudzira zvinowedzera) kuunganidza uye kuomesa madhadhi ekupwanya pane zvakawanda zvinonakidza kuve nazvo.
Isu takawana Trover Seves the Universe kuve shanduko inozorodza kubva pane zvakajairwa. Izvo zvakare zvinonetsa, kunyangwe kukakamira kuyedza kuburitsa mapuzzle akasiyana siyana kana kungoedza kufambidzana apo vatambi vanokutsamwira iwe nekuziva kusiri madikanwa muhupenyu hwavo, pane zvakawanda zvekuita kuti urambe uchiita.
Type: Kuvhurika-world superhero chiitiko chinonakidza
Chii chinoita kuti chinakidze? Iwe unotamba saBatman, chii chimwe chaunoda?
mutsikisi: Warner Bros Inoshanda Yekunakidzwa
Mukugadziri: Rocksteady Studios
Iwo akanakisa emitambo yeBatman uye mutarisiri chaiye, Batman: Arkham Knight ndiwo mutambo wekupedzisira mu trilogy uye inonakidza.
Batman Arkham Knight ongororo: Zvakanakisa zveBat zvakadaro
Scarecrow yadzoka kuzoparadza guta reGotham uye ibasa raBatman kumumisa iye nevamwe vake. Nebatmobile yakagadziridzwa, pamwe nekuwedzeredzwa kurwisa, kubira, forensics uye kufamba mutambo uyu weBatman une zvese.
Chii chinoita kuti chinakidze? Yakanakisa mifananidzo uye inoshamisa nzvimbo yekuongorora, kupora uye kuyemura
Mukugadziri: Eidos-Montreal, Crystal Dynamics
Mumvuri weTomb Raider ndiyo yekupedzisira chikamu cheLara Croft's mavambo trilogy. Isu takafungawo kuti ndiyo yakanakisa kusvika pari zvino. Sezvaungatarisira, zvakakura uye zvirinani pane ake maviri apfuura mafambiro. Iyo ine yakadzika-yakadzika uye inonyudza nyaya yenyaya uye zvirokwazvo kushomeka kwemakuva ekurwisa nekuongorora.
Mvuri weTomb Raider wongororo: Stealthy finale yeLara Croft trilogy
PaPC, Mumvuri weTomb Raider unoshamisa uye tashandisa zvakanyanya yakajeka uye inonakidza foto modhi sezvatakatamba futi. Nekuti kunyangwe Lara Croft ari fan of selfies sezviri pachena.
Type: Sci-fi chiitiko chekushambadzira pamwe nekushandura nguva
Chii chinoita kuti chinakidze? Brilliant nguva manipulation gameplay mechanics iine hunyanzvi cinemaatics
mutsikisi: Microsoft Studios
Mukugadziri: Remed Entertainment
Takanakidzwa chaizvo Quantum Break izvo hazvina kushamisika sezvatiri isu tinoda chaizvo kufadza zvese Remedy Entertainment inoita. Alan Wake, Max Payne, Kudzora, rondedzero inoenderera.
Quantum Break inogona kunge yakakura kupfuura mimwe mitambo pane iyi runyorwa, asi ichiri kukosha kutarisa. Imwe nyanzvi yemubhaisikopo inotsanangurwa se "chikamu chemutambo, chikamu chinoitika chiratidziro" - asi usazvinetse hausi mumwe wemitambo yakaipa iyo inocheka kupfuura mafaro. Ingori kubhuroka kwakanaka kwekubata-nguva, kuridza pfuti uye nguva dzakanaka.
Type: Vhura-yenyika chiitiko chinonakidza
Chii chinoita kuti chinakidze? Chimwe chinonakidza GTA kushanya ine kusingaperi online kunakidzwa kuwanikwa
Mukugadziri: Rockstar North
NaGrand Theft Auto V, Rockstar yakaenderera mberi maitiro ekugadzira yakavhurika-nyika inoitikira neyakajeka mifananidzo, inoyevedza nyayaline, vanoita maficha uye zvimwe zvakawanda kunze.
Ehe, isu vatambi vePC taifanirwa kumirira kuti mutambo uburitswe sezvo Rockstar yakaenderera mberi nemafungiro ekushumira koni yekutanga, asi zvaive zvakakosha kumirira. Ichine itsva yekutanga-munhu maitiro uye akakurisa, anogara achiwedzera online maitiro zvakare, Gta V kurapwa chaiko.
Grand Theft Auto 5 ongororo: Bona fide kunakidzwa kukwira
Shuwa huru yekugara uchigadziridzwa uye zvemukati kune GTA Online, ive nechokwadi chekuti Gta V ndiyo chipo chinoramba chichipa uye pasina panikiro acharamba achidaro.
Hellblade: Chibayiro chaSenua
Type: Psychological chiito-chiitiko
Chii chinoita kuti chinakidze? Chinhu chinoshamisa chemuchadenga nezviratidzo zvinokatyamadza zvekupenga
mutsikisi: Ninja Pfungwa
Mukugadziri: Ichokwadi Ninja
Hellblade: Chibayiro chaSenua chiitiko chakakurumbira uye chinotamba nyaya inonakidza nerwendo rwemuchadenga mukurwara nepfungwa uye psychosis. Seta panguva yeViking zera, inokuisa iwe mushangu dzeSenua, murwi weCelt akaputsika ari parwendo kuenda kugehena kunoponesa mweya wemudiwa wake.
Kana iwe uchinakidzwa neinofadza, yemuchadenga uye inokatyamadza yakanaka yekuita adventures, saka iwe unozomuda uyu. Isu takafunga kuti yaive yakanyanyisa. Kana izvi zvakanaka zvaive zvisina kukwana zvakakwana, zvakave zvichangobva kuvandudzwa neVR rutsigiro ku - zvinoreva kuti unogona kutamba mutambo pane ese ari maviri Oculus kusanzwana uye HTC Vive.
Type: Mumwe-mutambi akaba
Chii chinoita kuti chinakidze? Sandbox kuurayiwa pamwe nezvakawanda sarudzo pane yekutamba uye yakawanda kutsiva
mutsikisi: IO Interactive
Mukugadziri: IO Inoshanda
Ona zvinopihwa Epic Games
Hitman 3 ndiyo yekupedzisira chikamu cheyazvino trilogy uye magumo akajeka kune iwo akateedzana. Kuda Hitman 2, mutambo wechitatu, unopa mitoro yekudzokororwa, ine nhamba inogutsa yenzira dzekupedzisa misheni yako unakirwe uchiita saizvozvo.
Hitman 3 ongororo: Iyo inonakidza sandbox ye sneaky stealth chiito
Hitman 3 inovandudzwa zvakare kana iwe wakatamba mitambo yapfuura kana kutenga iyo Deluxe package sezvo iwe usingangogone kudzokorodza mitambo yapfuura asi iwe unogona zvakare kutakura makiinura kubva kune mumwe mutambo uchienda kune mumwe. Kushandisa Hitman 3 gadget uye gizmos muHitman 2 kana zvinopesana. Isu tinongofarira kuwana iyo yekare Silent Assassin rating zvakadaro.
Type: Mumwe-mutambi wekutanga-munhu akahwanda chiitiko chekushambadzira
Chii chinoita kuti chinakidze? Chinyorwa chakapfuma chine fantasesa mutambo-chinja masimba ekuongorora
mutsikisi: Bethesda Softworks
Mukugadziri: Arkane Studios
KUSHAYA 2 ndiyo mutambo wechipiri mumakwikwi ekukunda mubairo neAleane Studios. Yakanakisa yekutanga-munhu stealth mutambo uyo unobvumidza iwe kusarudza kutamba sainga Empress Emily Kaldwin kana wekudzivirira wehumambo, Corvo Attano. Mashura kuuraya hunonakidza akawedzera, neine hutsinye kurwisa kurwisa hurongwa uye kusarudzwa kwemasimba akanakisa kusarudza kubva.
Yakasarudzwazve 2 ongororo: Imwe yemitambo yakanyanyisa kuba
Takanyatsonakidzwa nekuzvidzwa 2 patakaitamba zvakare mu2016 uye ichiri inonakidza izvozvi. Ukangomira mukati, unobva watanga kudanana. Paunenge uchinge waipedza iwe unokwanisa kusarudza kutsiva kana kuisa mari mune yakamira yekutevera Rufu rweMukoma.
Type: Kamwe-mutambi wekutanga-munhu chiitiko chinonakidza
Chii chinoita kuti chinakidze? Nhaurwa yakajekeswa inotsigirwa nezvinoyevedza uye zvemudenga maficha
Mukugadziri: Irrational Mitambo
Bioshock Infinite inonaka inonakidza kuwedzera kune Bioshock franchise uye kwete mutambo unofanirwa kufuratirwa. Simba revanhu rekutamba naro, pamwe chete nevanhu vanoshamisa mavara uye inonakidza nyaya inoita kuti mutambo uyu ubate chaihwo.
Hausi iwo mutambo mukurusa, asi zvirokwazvo haufanire kupotsa. Zvakare zvinogara zvichitengeswa pamitengo yepasi pevhu zvakare, saka tora.
Dhiyabhorosi May Mhere 5
Type: Chiitiko chekushanya / Hack-n-slash
Chii chinoita kuti chinakidze? Kudzoka fomu for Dante neinopfuura-iyo-yepamusoro-yekutanga-n-slash hondo, inotyisa mifananidzo uye maawa emafaro
Tarisa zvinopihwa kuFanatical/Zvione pane Steam
Dhiyabhorosi iwe waunoziva inodzoka muna Dhiabhu May Cry 5. Nenyaya yakagadzwa makore akati wandei mushure memutambo wapfuura, iyo DMC itsva inovimbisa pfumo rese-rakabata pfuti-kuridza chiito iwe unoziva uye unomuda asi iine yakatonyanya sitayela. Kana iwe uchinakidzwa newechitatu-munhu brawlers, saka mutambo uyu unotova uri unofanira-unotenga.
Best Multiplayer Online Hondo Arena (MOBA)
Type: Mahara-ekutamba MOBA
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo yemahara-yekutamba mutambo ine inorema eSports inotevera uye VR rutsigiro
Dota 2 ndeimwe yeSports inodiwa uye zvakare imwe yemitambo-yakatambwa pane Steam. Izvo nguva dzose tops iyo Steam Charts yevatambi vazhinji varipo uye ichokwadi PC mutambo wekutamba rudo.
Iyi yemahara yekutamba, PVP MOBA iyo yakatanga kuburitswa muna 2013 asi yaona yakawanda yehuwandu mumwedzi uye makore akatevera. Sarudza gamba rako uye kurira kunze neshamwari kushamwaridzana bots kana tora hunyanzvi hwako online uye kutarisana kutarisana nevatambi vanobva pasi rese.
Type: Kuvakwa kweguta / zano simulation
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo inonakidza uye inonzwisisika yakatsanangurwa simulation mechanic, inofara-vibe ruzha uye kusingaperi sarudzo mumutambo
mutsikisi: Kalypso Media
Mukugadziri: Limbic Varaidzo
Tropico yadzoka uye yakakura uye iri nani kupfuura nakare kose! Iyi inonakidza yakatsanangurwa uye inonakidza guta rekuvaka simulator iyo inoita kuti iwe ufunge nezvekufunga kwevanhu vako uye maitiro aunoita pavanenge vachizvitonga.
Unogona kusarudza kuve anotya kudzvinyirira kana wekushongedza munhu, uye kuronga ramangwana renyika paunenge uchienda.
Isu tinonakidzwa chaizvo nekubuda kweakateedzana. Yakanyatsorondedzerwa uye inokutendera kuti utore mune zvese zvinogona kuitika munharaunda kusvika kune manejimendi emabhizinesi ega ega kusanganisira kubatira uye kudzinga kwevashandi.
Ehezve, zvese zvinowanzoitika zvekuvaka-guta kunakidzwa kuri pano - kusanganisira nerudo kugadzira maguta ako, kuvaka zvivakwa uye kuita mari, asi kune zvakawanda kuTropico 6. Kunyangwe iwe uri kutumira vapambi kuenda kunoba Statue yeRusununguko kana kugadzirira hondo nemamwe marudzi, kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzekutamba. Iwe unogona zvakare kudzika mukati mako wega kana neshamwari mune chero co-op kana yemakwikwi mamiriro. Maawa nemaawa ekunakidzwa kuve nawo uye anofara Carribean rwiyo rwekuchengetedza iwe kuti ufare.
Chii chinoita kuti chinakidze? A hilarious uye yemazuva ano-kufungidzira zvekare yekirasi Diki Chipatara
Mukugadziri: Mbiri mbiri Studios
Kana Two Point Hospital inoita kunge yakajairika, ndizvozvo nekuti ndizvo. Uyu mutambo wakanaka kwazvo wemazuva ano wekufungidzira zvekare we1997 classic theme chipatara. Iyo yakatovakwa nevamwe vevagadziri vakafanana, saka iri chaizvo korker.
Chipatara chePoint Point chinokuisa iwe mutariri wekumhanya izere-nehutano nzvimbo yekunakidzwa neese mafaro uye kutemwa nemusoro kunouya nebasa rakadai. Vaka uye chengetedza chipatara chako uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitaura nemazhinji evarwere vane mhando dzese dzezvirwere zvinotyisa nezvirwere. Iko kumanikidza kuri. Iwe uchakurumidza kuve nerukudzo rutsva rwakawanikwa kune vese vashandi vezvehutano kana pasina chimwe chinhu.
Type: Kuvaka simulation
Chii chinoita kuti chinakidze? Vaka yako PC yekurota pasina mari yekushandisa chaiyo kutenga zvikamu
mutsikisi: Irregular Corporation
Mukugadziri: Claudiu Kiss, Iyo Irregular Corporation
PC gamers rudo simulator yakanaka uye kune akawanda acho - zvese kubva kune vasikana simulators kusvika kumabhazi kutyaira simulation. Asi chii chakakodzera kupfuura mutambo uyo unobvumidza iwe kutevedzera kuvaka inonakidza nyowani PC yemitambo?
Maitiro ekuvaka uye kusimudzira yako yega mutambo wePC
Kana iwe usingakwanise kuvaka yako kana kuda kuziva kuti ungazviite sei, uyu mutambo unogona kunge uri wakakwana kutenga.
Type: Co-op fizikisi puzzle mutambo
Chii chinoita kuti chinakidze? Hilarious fizikisi mutambo nemafaro magiraidhi uye kunakidzwa neshamwari
mutsikisi: Curve Dhijitari
Mukugadziri: Hapana Mabhureki Magemhu
Hunhu: Kuwa Flat chinhu chakakosha. Pakati payo, iyo quirky puzzle papuratifomu, asi zvakanyanya kupfuura izvozvo. Uyu mutambo unonakidza wefizikiki une mifananidzo inofara uye yakapusa, asi inonakidza mamiriro. Kutamba mutambo uyu, chinangwa chako ndechekutsvaga kubuda kune yega yega inoshamisa uye nhanho nhanho nekugadzirisa mapuzzle nenzira dzakasiyana siyana uchiyedza kusakwidza kumusoro kunotevera. Kutamba neshamwari kunokurudzirwa pano, sezvo zvichinyanya kuseka nekambani.
Yakanyanya Massively Multiplayer Online (MMO) mitambo
Nyeredzi Kutenga Online
Type: Yemahara-yekutamba sci-fi MMO
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo MMO yakaiswa mune Star Trek yechisiko iwe kwaunogona kutyaira yako ngarava uye kuongorora nyika idzva
mutsikisi: Yakakwana Nyika Varaidzo
Mukugadziri: Vadivelu Comedy Cryptos
Star Trek Online yakakurumbira MMO iyo inobvumira vatambi kuraira ivo voga nyeredzi uye vakashinga kuenda uko pasina munhu akamboenda. Tora chikamu muhondo huru dzehondo, ongorora nyika itsva, kurwira madzinza akasiyana. Kune akawanda sarudzo yemutambo pano.
Star Trek Online yakaona bhuti rezvesarudzo kubvira payakatangwa muna 2010 uye richiramba richizivikanwa pakati pevateveri. Iko kwekuwedzera iko kunosanganisira zvirimo kubva kuNetflix dzakateedzera Startrek Discovery futi.
Type: Kubata MMO
Chii chinoita kuti chinakidze? Chiito-chiitiko MMO yakaiswa pamakungwa makuru ane akawanda emagetsi, ma-cann-based based and sea shanties
Mukugadziri: Microsoft Studios
Zvione paMicrosoft/Zvione pane Steam
Gungwa reMbavha rinogona kunge risiri remunhu wese, asi zvirokwazvo rine zvakawanda zvarinowana. Pfeka ngowani yako yepirate uye ufambe mumakungwa uchitsvaga hupfumi, grog uye nenguva dzakanaka chaizvo. Pane zvakawanda zvekunakidzwa kuve nazvo kana iwe uchikwanisa kuzviwana - uchirwira icho pamwe neswashbuckling mafupa, uchirwa icho pamwe nevamwe pirate vatambi kana kungo ramming chikepe chako kupinda kune mumwe munhu mukuyedza kukwira nekuba zvese zvavo zvakapambwa.
Gungwa reMbavha maongororo: Rinotyisa timu-play rinoregedzwa pasi nematambudziko mabasa
Mutambo wakave nerunyararo rwezvitsva zvemukati zvakawedzerwa kubvira pawakatanga kuvhura, saka izvozvi zvakafanira kufunga. Kunyangwe kunakidzwa kwakawanda kunogona kuve nako kana iwe uine vamwe vari pirating vanofara shamwari iwe iwe yaunogona kutamba nayo.
World pamusoro Warcraft
Chii chinoita kuti chinakidze? Inonyanya kuzivikanwa MMO kutenderera?
Nyika yeWaroyi pamwe ndiyo inozivikanwa kwazvo MMOs yenguva yese. Vazhinji PC PC gamer yakanyura kuwanda kwemaawa mumutambo uyu uye vane nyaya dzekutaurira nekuda kwayo.
WoW ndeimwe yeakanakisa anotengesa mitambo yePC yenguva dzese uye kunyangwe ichiburitswa muna2004, ichiri chipenyu uye kurova. Mutambo uri kutora reboot muchimiro che Nyika yeWarsters Classic pane imwe nguva, asi panguva ino, unogona edza mutambo uyu mahara.
Chikwata Wars 2
Chii chinoita kuti chinakidze? Iko hakuna yakatsaurwa yekurapa kirasi iyo iri chaiyo isina kujairika kune urwu rudzi rwemutambo
Guild Wars 2 iri online MMO ine yekumhanyisa kurwisa kurwa uye yakapfuma uye ine ruzivo rwezvose kuongorora. Yakazara izere nekutyisa-kutora mweya-kutora nharaunda kuenda kune inoitika pamwe nekunetsa PVP modes. Kusiyana nemamwe maMMO, Guild Wars 2 haina mari yekunyorera, iri zvekare wakasununguka kutamba.
Guild Wars 2 inobvumira mutambi kuti agadzire hunhu kubva kumhando shanu dzakasiyana uye huchisere hwakasiyana, hunhu uhu hunotaridzawo hunyanzvi vatambi vanogona kuwana uye nokudaro zviitiko zvavo. Iko kukwanisa kushandisa kuvaka nekushandisa kuzunza zvombo chiratidzo chaicho kwatiri.
Yakanyanya mitambo yemuchadenga / inotyisa
Type: Psychological kupona kutyisa
Chii chinoita kuti chinakidze? Iyo inotyisa yepfungwa inotyisa apo kamera yevhidhiyo ndiyo yako chete chishandiso pakupona
mutsikisi: Tsvuku Mbiya
Mukugadziri: Mbiya tsvuku
Kana iwe uchinakidzwa nemitambo yako nehutano husina hutano hwekutyisa saka Outlast 2 ingangodaro iri bhegi rako. Taundi rakasviba rakasvibira riri pakati pegwenga rinopa iko kushure kwepfungwa inotyisa yekupona iyo ichave iwe unomhanyira zvikomo.
Iwe unotora chinzvimbo chaBlake Langermann, mutori wenhau anoongorora nezve chinangwa kusunungura nyaya idzi hapana mumwe munhu angashinga kubata. Kamera yevhidhiyo ine maitiro ekuona husiku ndizvo chaizvo chishandiso chako chekupunyuka uye chinhu chete pakati pako nerufu runotyisa. Chokwadi mutambo uyu hausi weanotyisa.
Type: Sci-fi Kupukunyuka kunotyisa
Chii chinoita kuti chinakidze? Yemuchadenga inotyisa mutambo wakaiswa muAngen zvakasikwa nehuwandu hwakawanda hwakakomba-hwekuita chiitiko
Mukugadziri: Creative Assembly
Zvinotyisa kumashure-mvura maguta haizi chinhu chako? Zvakadii nekupona kunotyisa kwakaiswa mune yeAeni chisikwa. Kugara uchityisidzira kufa uye kushaikwa kwezvinhu zvekubatsira iwe kuzvidzivirira Alien: Kusurukirwa kukwira chaiko kunonakidza. Chero bedzi iwe uchigona kurarama nekumanikidzwa.
Yakanyanya mijaho mitambo
Dhara Rally 2.0
Type: Rally / racing sim
Chii chinoita kuti chinakidze? Off-nzira mujaho wechokwadi racing mechanics uye awesomely zvinonakidza mota
Mukugadziri: Codemasters Mujaho Studio
DiRT Rally yadzoka neimwe moyo-inodziya, yekupedzisira-yeyako-chako chigaro racing sim. DiRT Rally 2.0 inopa kusarudzwa kweiyo iconic rally nzvimbo, kune mamwe emagetsi ane simba zvakanyanya-kumigwagwa akambowanikwa aripo.
Isu takada yekutanga DiRT rally uye uyu mutsva mutambo wakaenzana sekushamisa. Icho chiitiko chinonyudza nguva ino kutenderera zvakare nekubata kwechokwadi, nzvimbo chaidzo-dzehupenyu uye chakanyanya kutyaira chiitiko chauchazoda.
Nemotokari dzinodarika makumi mashanu dziripo kuti tune, kutyaira uye nhangemutange, DiRT Rally 50 kuputika. VR inotsigira zvakare kuuya.
Type: Mujaho / kutyaira sim nerubatsiro rweVR
Chii chinoita kuti chinakidze? Pamotokari dzinopfuura zana nemakumi maviri dzinokwikwidza pamhando dzakasiyana siyana dzine simba pamusoro pemamiriro ekunze
mutsikisi: Bandai Namco
Mukugadziri: Zvishoma Mad Studios
Kana iwe uri akazvipira mota-mujaho anofarira ipapo Project Cars 2 ingangoita zvirokwazvo inofanira-kutenga. Iri kubhururuka nemota, makwara uye dhizaini yakakura chaizvo inosanganisira ine simba pamusoro uye nemamiriro ekunze zvinokonzeresa chiitiko chinonakidza chekutyaira.
Project Cars 2 ongororo: Iyo inofanirwa-kutenga yeakaomesesa mujaho mafeni
Project Cars 2 ine 180 mota uye zvimwe zvekutamba nazvo. Inozvirumbidzawo VR rutsigiro rweOculus Rift, HTC Vive uye Windows Yakavhenganiswa Reality mahedhifoni uye kugona kutsigira kusvika kune 12K zvinoonekwa zvakare. Zvinoshamisa kwazvo.
Chii chinoita kuti chinakidze? Kubvarura nyika mumhando dzese dzemota dzine kufambira mberi kwakanaka uye marudzi ese emhando dzemujaho
Mukugadziri: Mitambo Yekutamba
Platform: Xbox chitoro
Pane zvakawanda zvinofadza kuva nazvo Forza Horizon 5. Haisi iyo chete yakanaka, zvakare yakazara yakazara nemota, marudzi ese emarudzi akasiyana, miti yekufambira mberi uye zvimwe zvakawanda kunze. Isu tinoda zvakare kuti kukanganwira sei mutambo uyu. Zvinofadza kurova nzira yako nepafenzi, cacti, zviratidzo zvemugwagwa nezvimwe. Kubvarura nyika, kutsvedza uye kutsvedza uye kungova nemafaro akawanda. Nzvimbo yeMexico yakakura uye yakasiyana zvinoshamisa, inopa maawa nemaawa ekunakidzwa.
Best Real-Nguva Isu (RTS)
Kambani yemagamba 2
Type: WW2 mauto RTS
Chii chinoita kuti chinakidze? Yakanakisa mauto RTS nemauto akasiyana siyana kutamba achitenderera nawo
Mukugadziri: kakasaririra Entertainment
Kambani yemagamba 2 inogona kunge ichikura mumakore, asi ichiri imwe yemitambo yedu yeRTS yatinofarira. Uku kupenya kwemauto chaiko-nguva zano mutambo ine zvakawanda zvekunakidzwa kuve nazvo.
Tamba wega kana neshamwari dzinopesana ne bots kana vapikisi chaivo, uchishandisa mauto akasiyana siyana pane akasiyana akarwa ehondo. Shandisa ako akadaira mauto uye kurova mauto uye sundidzira nzira yako kukunda.
Tichave tichiwedzera kune iyi runyorwa mune ramangwana, saka tizivisei mune zvakataurwa chero ewenyu mafaro atingave takarasikirwa.
Hondo Yese: Warhammer II
Type: Kufungidzira RTS
Chii chinoita kuti chinakidze? Turn-based kunakidzwa muWarhammer zvakasikwa kubva kune masterful Hondo Hondo yakatevedzana
Yakazara Hondo izita rakafanana nemitambo inoshamisa yeRTS. Iyi franchise ine mhasuru yakakomba. Kanda mune imwe ngano yeWarhammer uye mashiripiti, epic chaiyo-nguva kurwa uye kukunda kwepasirese uye iwe une mimwe mitambo yakanaka. Kana iwe uri fan yemitambo yeRTS, asi usati wanyudza chigunwe chako muTotal War franchise, iyi inogona kunge iri nzvimbo yekutanga.
Best Co-op mitambo
Ready kana Not
Type: Chekutanga-munhu co-op Bhowa
Chii chinoita kuti chinakidze? Yakanyanya kuchenesa imba ine njodzi kumativi ese
mutsikisi: Void Interactive
Mugadziri: Void Interactive
Kugadzirira kana Kwete kunakidzwa kwakanyanya. Iyi inyanzvi yemunhu wekutanga kupfura iyo inokuisa iwe shangu dzemapurisa eSWAT, kupamba zvivakwa kugadzirisa nekutyisidzira mabhomba, nhapwa, vanopfura vanoshanda uye nezvimwe.
Tarisira njodzi yakawanda (uye kunakidzwa) nemasuo akavharirwa magonhi, vanhu vasingadyidzani, vavengi vane njodzi zvakanyanya uye nezvimwe. Ready or Not inonakidza kwazvo neshamwari. Iwe uchafa zvakanyanya, asi iwe uchada miniti yega yega.
Kudya Chiedza 2
Type: Co-op yakavhurika-nyika zombie chiito-adventure
Chii chinoita kuti chinakidze? Inopenga yakanyatsokwenenzverwa parkour uye inogutsa zombie-kuuraya chiito.
Takatamba zvishoma Kudya Chiedza 2 kare uye kunyatsonakidzwa nazvo nekuda kwezvikonzero zvakawanda.
Pane zvakawanda zvekuda neKufa Chiedza 2 - mutambo wakavhurika wepasirese wekupona uyo unokupinza iwe pamhando dzese dzema zombie menaces. Asi uyu haasi weavhareji yako yekupfura sezvo inoratidzira inoshamisa parkour mechanics inokuona uchimhanya uye uchisvetuka pamusoro pematenga edzimba, uchikwenya zvivakwa uye uchimhanya nepakati penyika inotambarara kuti urambe uri mupenyu.
Kanda mune yekugadzira system iyo inoita kuti iwe ugadzire zvombo zvinotyisa kusanganisira kubatanidza mabhatiri, acid uye nezvimwe kumapanga, machete, baseball bats uye vamwe vane hutsinye kufa-vatengesi uye iwe uchave uine nguva yakanaka chaizvo.
Sokunge izvo zvese zvanga zvisina kunaka, iwe unogona zvakare kubatana uye kuva neboka revanhu vanosvika vana vari kutamba co-op. Chii chinonakidza kupfuura kurova zombies uye kutamba kudzingirira neshamwari dzako?
Yakanyanya kunaka masiraidhi
Type: Multiplayer inotsvedza
Chii chinoita kuti chinakidze? Chimiro chenguva yekare ine hutsinye uye husina kuregerera kurwisa masisitimu
mutsikisi: Tripwire Interactive, Deep Silver
Mukugadziri: Kubvarurwa Banner Studios
Chivalry 2 kupenga chaiko ndosaka tichikuda. Uku kupfura kwevazhinji kunokuisa iwe munyika yengano pane yehondo ine ropa yakatarisana nemhomho yevamwe vatambi vachirwira ropa rako.
Sarudza kirasi yako yeunhu, tora giya rako uye urove muhondo nekuridza ropa-kuridza mhere yekurwa. Rova bakatwa refu uye udimbure noggin yemumwe munhu kana kurova huropi hwavo nedemo rakakura, sarudzo ndeyako.
Chivalry 2 ndeyechokwadi hoot. Kuuraya uye mhirizhonga zvakamirira mune isingaregereri slasher iyo inonakidza seyakanaka zvinogutsa.
Inotevera PC mitambo: Iyo yakanyanya mitambo mitsva yekutarisira mune 2022 uye kupfuura
Yekupedzisira Nongedzo kune Header Bidding Wrappers